RAVELONANOSY MAMY TIANA : TSY FAHOMBIAZANA HATRANY NY NATAON’NY FAT – MyDago.com aime Madagascar
RAVELONANOSY MAMY TIANA : TSY FAHOMBIAZANA HATRANY NY NATAON’NY FAT
Tsy fahombiazana hatrany ny nataon’ny fat hoy ny Ct Ravelonanosy Mamy Tiana androany teny amin’ny Magro Behoririka satria efa hitantsika ireny fa napetraka ny lalàna, tsy nahomby. Natsangana ny FFM kanefa tsy nisy fampihavanana vita teto, najoro ny rayamandreny mijoro tsy nijoro fa nandohalika. Rehefa hanao conference hoy izy dia fandaniam-bolam-panjakana no natao fa tsy nahomby. Nalefa ny tondrozotra hoy ity mpanao politika ity vao nandray anjara ny movansy Ravalomanana dia nandeha na dia tsy tanteraka aza satria Rajoelina no manao izay tsy hahatanteraka azy. Teo indray hoy izy dia hanao filoham-pirenena daholo ireo 34, efa saika hahazo fiara 4×4, kinanjo tsy fahombiazana satria nolavin’ny HCC. Matiantoka izany. Tsy ho famendrofenondrona hoy Mamy Tiana fa lany ny volam-bahoaka. Efa fantatra fa tsy mety dia atao foana, ka tsy fanarahan-dalàna izany.Misy fotoana hanaovana ireny lalàna ireny. Izay hoyizy no hilazana fa tsy fahombiazana no ataon’ny fat satria tsy manaja ny fiandrianam-pirenena sy ny vahoaka Malagasy. Nambarany ihany koa fa isika manaran-dalàna ka ny tondrozotra no ara-dalàna. Ny lalàna navoakan’ny CES hoy Mamy Tiana no ara-dalàna. Na oviana na tsia hoy izy io dia efa nivoaka lalàna ary misy andininy ao amin’ny lalàna nanangana ny CES milaza fa tsy azo iverenana ny lalàna navoakany. Noho izany dia izay no hisarihana ny sain’ny iraisam-pirenena izay mikaroka ny ivoahana amin’ny krizy. Ny karohana dia ny hoe ahoana no fomba hanalana an’i Neny. Tsy misy hoy Mamy Tiana. Tsotra ihany ny antsika efa lalàna no nametraka azy teo , izy tsy nanongam-panjakana, izy dia manana zo ho hifidiana, ka inona no nahatonga azy tsy ho fidiana. Dikan’izany hoy izy dia tsyf itiavana, ary fankahalana politika no antony. Noho izany no mahatonga antsika hiaro ny ara-dalàna. Ankoatra izay dia nilaza ihany koa ity olomboantendry avy any Ankazobe ity fa hiditra pejy vaovao ny tolona amin’ny Sabotsy izao satria hiaro ny ara-dalàna eto amin’ny firenena isika amin’ny fanohanana an’i Neny. Ny fahitan’ny any ivelany hoy izy hoe ireo no mpanohana an’i Neny izay no mitarika ny fandresen-dahatra. Aoka atambatra ny hery ary manasa ny vahoaka manontolo mba hiaraka hifanome-tànana amin’ny Sabotsy. Tongava maro hoy izy fa fotoan-dehibe io. Sabotsy izany no mifankahita.
5 pensées sur “RAVELONANOSY MAMY TIANA : TSY FAHOMBIAZANA HATRANY NY NATAON’NY FAT”
FIHEMORANAN ATRANY NY AN ELAHY R I MAMY TIANA BE RESAKA.
18 juillet 2013 à 17 h 49 min
AOKA NY RESAKA BE R I MAMY TIANA FA HALAO RAJOELINA DIA POINT FINAL RAHA TSY IZANY DIA FIEMORANA.
TSY NISY FAHOMBIHAZANA NA KELY AZA..
KOA REHEFA MIVERINA NY ARA-DALANA SY HITSINY ARY NY RARINY ( etat de droit° ETO ANTANINDRAZANA DIA TSY HATAO ADIDY AMAN-ANDRAIKITRA NY MAMAFA NY ZAVA-DRATSY SY MAMOAFADY VITAN’IREO MPANONGAM-PANJAKANA IREO !
Raha ny kabarin i lereto no handrasana dia any a kady ny efarana .,ampy izay ny resabr ,raiso @ tandrony ny olana dia haholano.
Lasa MPIFOSA VAO MAMAFA TRANO eeeeeeeeee
tsy tokony t@’dry Sakamalao Rajakom-bazaha teo ireny ve no tokony nanao HETSIKA raha HANAO????
iza intsony no hetsehana eo e???tsssssss tsy lasa oah!!!!mbola ho ela e!!!!
Précédent Article précédent : Fotoan-dehibe amin’ny Sabotsy etsy amin’ny Magro
Suivant Article suivant : Lalao Ravalomanana : Nanatrika ny famaranana ny isan-kerintaonan’ny Synodam-paritany Afovoany Andrefana